Wasiir Warancadde waa geesi aan gabban | Haldoornews
Wasiir Warancadde waa geesi aan gabban
Wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Mudane Waran Cadde waa hadal yaqaan aan runta ka gabban. Waxaa dadwaynaha Somaliland u riyaaqeen sida raganimada leh ee uu ugu jawaabo faqash ka haddheenka Xamar jooga iyo dawladdooda maqaar saarka ah. Waa ninka kaliya ee siyaasiinta (xukuumadda) ka mid ah ee af iskaga celiya nimanka gardarada badan ee afka-ka-noolka ah ee jooga Xamar. Siyaasiinteena waxaan uga barannay marka ay ka hadlayaan ama u jawaabayaan calooshooda u shaqaystayaasha Huteelada Xamar lagu ilaaliyo inay si jilicsan ula hadlaan. Marka laga reebo Faysal Cali Waraabe oo isna ah geesi kale oo iska celiya nimankaas. Sidaa awgeed waxay u necbaayeen siyaasiinta Somaliland Faysal oo xataa abwaaniintoodu (sida Abshir Bacadle) ay gabayo u tiriyeen, ay ku caayayaan Faysal.
Waxaase baryahan dambe soo baxay isna oo Faysalba bara dhaafiyey wasiir Waran Cadde oo runtii ku hadla hadallo muwaadinku ku diirsado. Sidaa awgeed ayay waxay bilaabeen inay olole dacaayad ah ay ku furaan Waran Cadde. Illaa heer ay gaadheen intay waraaq foojari ah(oo markaad akhrido aad is odhanayso ilmo yar oo 10 jir ah baa qoray) ay yidhaahdeen waxa noo soo qoray wasiir Waran Cadde.
Waa ceeb iyo wax laga xishoodu waxa uu isku quudhay ninkan Gaafow la yidhaa oo ah faqash ka hadheen oo wali fadhiya xafiiskii Siyaad Barre u magacaabay (waqtigaa wuxuu u ahaa ku-xigeen Nuur Bidaar oo Siyaad adeer u ah, Markii USC Xamar qabsatay waxay dileen Nuur Bidaar, Gaafow oo ay Nuur Bidaar isku dambi ahaayeena way daayeen maadaam u hawiye yahay).
Markii waraaqdii been abuurka ahayd uu ku fashilmay, wuxuu la yimid haddana sheeko kale!!!!! Fikirkiisa iyo dhaqankiisuna weli waa habkii dawladdii diktaatoorka ahayd (keli telisnimo). Waxaa caddaynaysa waraaqda uu u qoray diyaaradaha sameeya duulimaadyada Xamar iyo Hargaysa oo u leeyahay waan idinka mamnuucay inaad Hargaysa tagtaan.
Bal isagu ma madaxwaynaa, ma raiisal wasaaraa, ma wasiirbaa? Muxuu yahay? Wuxuu guddoomiye ka yahay xafiis yar oo baasboor Soomaaliga bixiya. Arrintani waxay caddaynaysaa is dhex yaaca iyo protocool la’aanta Xamar ka taagan.
Waraaqdan lafteeda taya xumadeeda iyo siday u qoran tahay waad la yaabaysaa; oo waxaad is odhan ma inan yar oo dugsiga hoose ku jira ayaa waraaqdan qoray??? Xataa Hargaysa ma garanayo meel ay ku taal!!! oo wuxuu odhanayaa Hargaysa oo ku taal gobolka woqooyi BARI (cajiib: woqooyi bari waa Puntland). Markaad waraaqdan aragto waxaad markaaba fahmaysaa inuu tii u ku sheegayay Waran Caddana isaga laftiisu qoray waayo waa isku hab (Style), isku nuxur (hadal daciifa oo ka soo baxay nin caqli yar oo fikirkiisa iyo garashada afka-Soomaaliguba aad u kooban yahay).
Wasiir Waran Cadde waa nin garanaya sida loola hadlo wax-ma-garatada Xamar. Afkooda iyo sida ay iyagu fahmayaan ayuu ula hadlaa. Laakiin sida looga bartay wasiiradeena dibadda (ee kala dambeeyey) ee yidhaahda: “walaalaheena Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa……….” Hadalka noocan ah ma fahmayaan dhuuni qaatayaasha Xamar isku urursaday. Waran Cadde ayaa markaa ugu jawaaba sidii ku habboonayd ee ay fahmi karayeen.